कथा | साहित्य संसार
मङ्सिर महिनाको घमाइलो दिन थियो । चारैतिरको कुहिरो फारेर घाम लागे पनि मेरो मनमा डम्म बादल लागेको थियो । जति मनलाई सम्झाउन खोजे पनि फिटिक्कै सम्झाउन सकेकी थिइन । छोराछोरीलाई भनौँ भने उनीहरूलाई मामाघर कहाँ हो ? मामा कतिजना छन् र कस्ता छन् भन्ने थाहासम्म […]
कथा – चिया दिने केटी
शरद यामको ठण्डी बिहान । सडकमा कुकुरहरू भुकिरहेका थिए । कतै प्रत्येक घरमा त कतै बिराएर ऊ एकैक्षणका लागि साइकल रोक्थ्यो र बन्द पसलका सटरहरूमा , अफिस र घरका ढोकाहरूमा पत्रिका छिराइदिन्थ्यो । ग्राहक र पाठकहरूले भन्दा पहिले नै पत्रिका उसले छुन पाएपनि त्यसमा छापिएका […]
कथा – धुवाँ
‘फ्रष्टेड बौलाहा’ चोकको पूर्वपट्टि आएर उभियो । निर्माण पूरा हुन नपाउँदै अलपत्र परेको विवादित स्तम्भतिर फर्केर ऊ फेरि एकपटक जोडले हाँस्यो । ‘यहाँ सहिद स्तम्भ बन्नुपर्छ, कुनै भ्रष्टहरुको सालिक यहाँ बनाउन पाइँदैन ।’ उसले सबैलाई सुनाउन ठूलो स्वरमा करायो । यो चोक बजारमा त्यो बौलाहा […]
“काका ! यो दाइ तपाईंलाई खोज्दै आउनुभा’छ,” मैले माइलो काकाको नातिले औंल्याएतिर हेरें । एकैछिन यस्तो लाग्यो, म ऐनामा आफैंलाई हेरिरहेछु । तर, होइन ! मेरो यो रूप कहिल्यै थिएन । मैले केही बोल्नुभन्दा पहिल्यै त्यो युवक मेरो खुट्टामा घोप्टियो । “को हौ बाबु ? […]
पुष महिनाको बेलुकीको घामको स्पर्शले धर्तीलाई सुम्सुम्याएर सूर्य भर्खरै स्वयम्भु पारिको डाँडाबाट ओझेल प¥यो । सडकछेउमा आफ्नो ठेलागाडीलाई अड्याएर घामको न्यानो पाहार ताप्दै आफ्नो दुवै हत्केलालाई सिरानी हालेर सुतिरहेको धनेको शरीरले अब भने जाडोको महसुस ग¥यो । बतासिँदै आएको हावाको एउटा चिसो झोंक्काले ऊ ब्युँझियो […]
सौभाग्य हो कि दुर्भाग्य, म केही जान्दिनँ । साहित्यिक कार्यक्रममा एक वर्ष पहिले तिम्रो लोग्नेसँग भेट भएको थियो । त्यस दिन मैले ठानेँ, तीस–एकतीस वर्षको युवक, पक्कै पनि कसैको लोग्ने भइसकेको छैन होला । कविता लेखेर साहित्यमा नमेटिने नाम दर्ता गराइसकेको केटो, जसको प्रत्यक्ष अनुहार […]
कथा : नीलो रुमाल हराएपछि
अनमोलमणि अलकत्रे सडक। जहाँ रुखका लामा लामा छायाहरु बिलाएको थियो। हेर्दा लाग्थ्यो यो सडक कुनै बलिष्ठ पुरुषको नाङ्गो छाती हो। ऊ त्यही सडक छेउमा उभिएकी थिई र सोचको गहिरो दहमा डुबेकी थिई। उसले आफू गइरहेको दिशासमेत पत्तो पाएकी थिइन। ठ्याक्कै जानै पर्ने ठाउँ पनि थिएन। […]
प्रिय राजु, अपार माया । थाहा छ राजु आज मलाई रातभरी निन्द्रा लागेन, यता कोल्टे फेर्छु, उता कोल्टे फेर्छु, घरी उठेर पानी खान्छु, बस्छु, टोलाउठ्ठछु, कहिले रुन्छु, मन बुझाउँछु तैपनि निन्द्रा लागेन, लाग्दै लागेन । पट्यार लाग्दो अध्यारो रात कटाउन मलाई साह्रै गाह्रो भयो राजु […]
उनी रमिला हुन् ।रसिलो कसिलो देखिने कलिलो उमेर भएपनि,उमेर ढल्कि गएको झैं,अनुहारभरि पोतो निक्लिएको छ,थकानका रेखिहरू यत्रतत्र छरिएका छन । सिल्दै टाल्दै गरेर लाउने गरेकी ती लुगाहरूले उनको लाज ढाक्ने काम त गर्छ तर गरिबिलाई भने लुकाउन सक्दैन, उनको दुखः नबुझ्ने शायदै कोही होला तर […]